Ithegi: rap | Martech Zone
Lwesine, Matshi 12, 2015 Lwesine, Matshi 12, 2015 Douglas Karr
Iqale ngeTwitter… Douglas Karr Irhafu Tribute https://t.co/oPodYLEZnQ @douglaskarr #rappitt http://t.co/gVR64opiLM - Rapp Itt (@rappittmusic) Ngomhla we-10 Matshi 2015 Ukuthi nditshayelwe ngumoya yinto engekhoyo. Khange ndiyeke ukuhleka indlela ebhalwe kakuhle ngayo le rap kwaye ndaphandwa ngumntu endingazange ndadibana naye. Loo mntu wayenguDan Stokes. UDan waqalisa i-Rappitt.com kwaye esiqalo esinemali, wayekhangela iindlela ezizodwa zokufumana igama (lifumane?)
Izinto ezi-3 zokuQhuba-i-DMC zindifundise malunga neMidiya yokuncokola
NgoLwesibini, Novemba 15, 2011 NgoMvulo, Novemba 14, 2011 UMat Chandler
Nditsalele umnxeba njengesixhobo semfundo yobunene, kodwa ndiyakholelwa ngokuqinisekileyo ukuba umbono wehlabathi kufuneka uxelelwe yimithombo emininzi kunye namava kangangoko. Ukufunda incwadi yamva nje yingcali kwicandelo lakho kulungile. Ukutya uninzi lwezithuba zebhlog kunye namanqaku eendaba kangangoko unakho malunga nomzi mveliso wakho kuluncedo. Kuyacetyiswa ukuba uzimase iinkomfa nokuhlala kwiingcaciso-ntetho zokuqhubela phambili nomsebenzi wakho. Kodwa kubalulekile ukujonga ngaphandle kwe-orbit yesiqhelo